» बिरालो किन म्याउँ–म्याउँ गर्छ ?
बिरालो किन म्याउँ–म्याउँ गर्छ ?
८ माघ २०७६, बुधबार १३:०२
एजेन्सी । बिरालो किन म्याउँ गर्छ ? प्रश्न सामान्य छ, तर जवाफ सामान्य छैन । जब बिरालोलाई हामी मायाले चलाउँछौँ तब ऊ म्याउँ गरेर आफ्नो खुसी व्यक्त गर्छ । तर, बिरालोले म्याउँ गर्नुको रहस्य यति मात्रै होइन ।
२३ वर्षमै हजुरआमा !